Fanamarinana - Shanghai Gianty Trading Co., Ltd.
Ny BPI dia i Amerika Avaratra dia manamarina ny vokatra vita sy ny fonosana entana. Ny programa fanamarinana ataontsika dia miantoka fa ny vokatra sy ny fonosana mampiseho ny marika BPI dia nosedraina samirery ary nohamarinina araka ny fenitra ara-tsiansa. Mampiroborobo ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fanavahana sy fanarenana ireo akora «compostable» amin'ny alàlan'ny famonoana monisipaly sy fanaovana varotra.
Fonosana na vokatra mitondra ny marika INDUSTRIAL marika famonoana azo antoka dia azo antoka fa ho azo alaina ao anaty zavamaniry famatsiana indostrialy. Io dia mihatra amin'ny singa rehetra ao aminy, ny inks ary ny additives. Ny hany marika tokana ho an'ny programa fanamarinana dia ny fenitra EN 13432: 2000 mifanaraka: amin'ny toe-javatra rehetra, ny vokatra rehetra mitondra ny marika famoahana OK dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny EU Packaging Directive (94/62 / EEC).
Ity fanamarinana ity dia manamafy fa Gianty dia voasoratra ao amin'ny US Sakafo ara-tsakafo sy ny zava-mahadomelina araka ny lalàna FDA Foodization Modernization Act sy ny lalàna momba ny sakafo ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana federaly, araka ny fanitsiana ny lalàna Bioterrorism, ary hahazoana ny isa fisoratana anarana FDA etsy ambony.
Ny BRC Global Standards Directory dia angon-drakitra ofisialin'ny fanamarinana rehetra notarihan'ny fitsipi-pitondrana BRC Global Standard. Ny vatan'ny fanamarinana dia mitantana ny fanovana rehetra amin'ny lisitry ny tranonkala. antontan-taratasim-baovao sy ny sata fanamarinana momba ny sata fanamarinana natao tao amin'ny Directory.
SMETA mijoro ho an'ny Sedex Members Ethical Trade Audit ary iray amin'ireo endrika fiasan'ny fanamarinana etika be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao. Manambatra ireo fanao tsara indrindra eo amin'ny sehatry ny asa sosialy orinasa. Ny foto-kevitra dia mamaritra ny fomba iray mifototra amin'ny kaody fototry ny fizarana etika (ETI).
Araka ny lalàna mifehy ny vaomiera (EU) No 10/2011 tamin'ny 14 Janoary 2011 miaraka amin'ny fanitsiana hamaritana ny fifindra-monina SGS.
Araka ny FDA 21 CFR 175.300, ny fitrandrahana betsaka dia mahafeno ny fenitra alàlan'ny SGS.
Ny rafitra fanaraha-maso ara-tsosialy momba ny fanarahan-dalàna ara-tsosialy (BSCI) dia fomba fiasa eoropeana hanatsarana ny asa sosialy any amin'ireo firenena mpamatsy amin'ny alàlan'ny vahaolana fanaraha-maso ara-tsosialy mitovy.
Ny Bisphenol A, izay antsoina matetika hoe BPA dia zavatra simika hita ao amin'ny plastika mafy ary ny lamban'ny sakafo sy ny sotro fisotroana izay mety hitovitovy amin'ny estrogen sy hormonina hafa ao amin'ny vatan'olombelona. Manana ny fanamarinana izahay fa tsy misy BPA amin'ny vokatrao.
Ny fenitra ISO 9001 dia miorina amin'ny fitsipika maromaro momba ny fitantanana kalitao. Anisan'izany ny fifantohana mpanjifa matanjaka, ny antony manosika ny fitantanana ambony, ny fomba fizotrany ary fanatsarana maharitra.
TÜV AUSTRIA dia orinasa fitsapana, fanaraha-maso sy fanamarinana orinasa maneran-tany omena eran-tany hanolotra serivisy ho an'ny lahasa faha-3 fisoratana anarana / fanamarinana.